Isibikezelo ngehhotela kwaNongoma siyazihlonza – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Isibikezelo ngehhotela kwaNongoma siyazihlonza
Umndeni wakwaNzuza ongosomabhizinisi kwaNongoma (Isithombe: nguBanele Bhengu/Ingabadi Media Images)
USOMABHIZINISI wakwaNongoma, KwaZulu-Natal, ongumnini wehhotela elidumile eZululand, wafeza iphupho likayise owayebhuqwa amaBhunu engafuni ukumnika indawo ayemdayisele yona. UMnu uMlungisi Nzuza oneminyaka engama-54 ubudala ungumnikazi wehhotela iNongoma Inn. Leli hhotela elisezingeni le-3 Star, lakhiwe emhlabeni kayise ayewudayiselwe amaBhunu kodwa okwathi uma esefuna ukuwusebenzisa, amgolozela, amyalela ukuthi kuyomele akhe kuwo ihhotela elisezingeni i-5 Star kuphela hhayi okunye. Ngenxa yalo myalelo, ubaba kaNzuza, okunguMnu u-Ambrose Nzuza wagcina ehlulekile ukusebenzisa umhlaba wakhe.
Ngemuva kwamashumi eminyaka, leli phupho lifezwe indodana yakhe. “Empeleni angazi noma ngingathi ngifeze iphupho likababa noma lamaBhunu ayemcindezele embhuqa ngoba ezitshela ukuthi akasobe akwazi ukwakha lolu hlobo lwehhotela ayemphoqa ngalo ngoba ayengafuni ukuba asebenzise umhlaba ayemdayisele wona,” kusho uNzuza.
Ngaphandle kwalokho lo somabhizinisi usuka kude nempilo yokuzakhela umnotho njengoba esekuleli zinga. Engxoxweni abenayo nephephandaba UBUKHOSI, uthi ngesikhathi eqeda umatikuletsheni waqashwa yinkampani eyabe inezitolo ezinkulu Iziko Pty Ltd, eyayingeyosomabhizinisi boHlanga okwakukhona phakathi kwabo noyise. Ngaphansi kwale nkampani, kwakuzitolo ezinkulu, esinye sazo siseMpangeni okuyilapho asebenza khona. Ngaphambi kwalokho uNzuza wayezalelwe ekudingisweni eSwazini kodwa izimpande zakhe ziseMahlabathini, nokuyilapho ababuyela khona ngesikhathi uyise esebuyela ekhaya. UNzuza wabe esefudukela kwaNyuswa eyohlala noyise omncane. Ufunde ezikoleni ezahlukene, okubalwa kuzo iBhekuzulu, iDlangezwa, iNkamane naseNkosiyethu.
“Ngasebenza eZiko iminyaka emibili nezinyanga ezine. Ngemuva kwalokho ubaba wangithatha ukuba ngiyosebenza ehhovisi eliyikomkhulu lesitolo sakwaSpar. Lapho ngangisebenza njengomcwaningimabhuku ngibheka ukusebenza kwezimali zabo. Ngisebenze khona iminyaka emithathu,” kusho uNzuza. Wavumelana nabangane bakhe ukuba bayobhalisela ukufunda eNyuvesi. Nemphela bafunda Ongoye baze baphothula izifundo ababezenza. Ngowe-1996 uNzuza wabe eseshadelwa intombi yakwaNtshangase eyaye inguthisha, okwakusaphele unyaka ethenge isitolo sakhe sokuqala. Bathola abantwana abathathu.
Ngesikhathi uMaNtshangase egana, uNzuza uthi uyise wamxwayisa esazogana wathi “Kuyomele wazi wemakoti ukuthi lo muntu ozomgana ucwile ezikweletini”. Ngaphandle kwalokho uNzuza wayalelwa umkakhe ukuba bangene ebhizinisini lokupheka lamahhotela. “Umkami wayeyithanda into ehlangene nebhizinisi lokupheka ngoba wayengakholelwa endabeni yezitolo. Sabe sesiqala iNongoma Lodge. Inkinga esasinayo sasisaba ukuyivula ngoba sasingenalo ulwazi olwanele ngaleli bhizinisi. Isimanga esenzeka kwaba ukuthi abantu bokuqala abafika bathi akukho lapho abazoya khona ngakho bafuna sibavulele balale. Yilapho esafunda khona ngaleli bhizinisi,” kusho uNzuza. Kumanje ibhizinisi iLakeview selikhule ladlondlobala. Babuye bavula iNongoma Inn, basuka lapho basungula ihhotela eliseMbazwana. UNzuza uthi baneqhaza elikhulu emnothweni wakwaNongoma ngoba bakholelwa ekuqasheni intsha yendawo. Udalule ukuthi abanye abasebenzi bafika bezokwenza ingadi noma bezoshanela kodwa bese bebona ikhono elingaphezulu babaqeqeshe.
Abanye babo babahambisa kwamanye amazwe ukuze bafunde kabanzi ngokuphathwa kwamahhotela. Konke bakwenza nomkakhe uMaNtshangase kanti banezikole abazilekelelayo ukuze zikwazi ukusebenza kangcono kumatikuletsheni, kanti ezinye uma kunezakhiwo ezidingekayo zabafundi bayaxhasa. Kunezingane zasemphakathini abazifundisa ezikhungweni zemfundo ephakeme ezisuke zifike zizocela umsebenzi kodwa babone iminyaka yazo bazisize ngokuthi ziyofunda . Okwamanje uNzuza uthi nakuba beneqhaza emnothweni wendawo kodwa basabhekene nezinselelo njengokuntuleka kwamanzi. Uthe lokhu kuyabalimaza ngoba ibhizinisi labo linzima lincike kubantu ekutheni uma bevakashile bakuthola konke yini abakudingayo. Udalule ukuthi njengoba kunenkinga yamanzi, lawa awasebenzisayo uwadonsa ngaphansi komhlaba nokuyinto azenzele ngokwakhe. Ukhale nangokungcola kwedolobha ukuthi kuyabakhinyabeza bona abasebhizinisini lokuvakasha. Useke waqokwa benomkakhe uHulumeni wesifundazwe ukuba beluleke osomabhizinisi abakuleli bhizinisi ukuze babone. Ezinye izinto abazitholile ukuthi abantu boHlanga abakaqeqesheki kahle ngoba abanye bavele babenebhizinisi lokulala emzini yabo bese izivakashi zizithola zingakhululekile, ngenxa yokuthi wonke umndeni usuke uphithizela kuyo leyo ndawo. Okunye ukuthi abanye bavele bakhe izindawo lapho okungangeni ngisho imoto. Ubuye wakhala ngabaMhlophe wathi ezindaweni ezifana nakoShowe kusakhonya bona ngezindawo zokulala. Uthe lokhu kwenza kube nzima kwaboHlanga abazama ukungena kuleli bhizinisi ngoba bagcina bengaphumelelanga. Uphinde waxwayisa ngokuthi uma ungenalo uthando ngaleli bhizinisi akulula ukuphumelela ngoba imali yakhona ihamba nezikhathi ezithile zonyaka.